UKnockin 'Emnyango waseZulwini nguBob Dylan - Izinto Zobugcisa
UKnockin 'Emnyango waseZulwini nguBob Dylan
Le ngoma ibhaliwe ngokwembono yesherifu yokufa:
Mama, susa le bheji kum
Andikwazi ukuyisebenzisa kwakhona
Kumnyama, kumnyama kakhulu ukuba ndibone
Ndiziva ngathi ndinkqonkqoza emnyango wezulu
UDylan wayibhalela ifilimu yaseNtshona ye1973, UPat Garrett kunye noBilly The Kid . Idlala ngelixa uSheriff Colin Baker esifa kumanxeba akhe. I-Dylan cameos kwi-movie njengomlingiswa, i-Alias.
UBooker T. Jones ngamanye amaxesha uxela ibali lokudlala ibass kule track (yena noDylan babengabamelwane eMalibu), kodwa uTerry Paul ubizwa ngokuba ngumdlali webhasi. UJones uzuzwa kwezinye iingoma ezine ezivela kwingoma yesandi.
Abanye abasebenzi kwi 'Knockin' Emazulwini Emnyango 'zezi:
Iimpawu, Isigingci: Dylan
Isiginci: Roger McGuinn
Iingoma: UJim Keltner
IHarmonium: UCarl Fortina
Umbhobho: UGary Foster
Vocals zokuGcina: UBrenda Patterson, uCarol Hunter, uDonna Weiss
Imipu N 'Roses yayigubungela le albhamu yabo ka-1991, Sebenzisa ukuCamngca kwakho II . Bayidlala ngo-1992 kwikhonsathi yomrholo kaFreddie Mercury, imvumi ephambili ye-Queen, eyabulawa sisifo sikagawulayo. Ngama-72,000 abantu ababezimase le konsathi, neyayibanjelwe kwibala laseLondon iWembley. Kwimeko apho uyazibuza, ukuya esiphelweni sale nguqulelo, indoda esefowunini ithi, 'Kungcono uqale ngokuthambisa isikhundla sakho kuJack, kuba nguwe kunye ne-libido yakho edlakadlaka, ibhanki kunye ugqirha ogulayo, ngonaphakade umntu kwaye ngekhe kube lithamsanqa ukuba ungaphuma ebomini uphila. '
Ngo-1996, uBob Dylan wavumela imvumi yaseScotland uTed Christopher ukuba abhale ivesi entsha ka'Knockin 'kuMnyango waseZulwini' uChristopher awayeyibhalele ukukhumbula abantwana besikolo kunye notitshala owabulawa kwindyikityha yokufa yaseDunblane. Eli lelinye lamaxesha anqabileyo uDylan avumele ngokusemthethweni umntu ukuba ongeze okanye atshintshe amazwi kwenye yeengoma zakhe. Inguqulelo kaChristopher yafika kwi # 1 e-UK.
Elinye lamaxesha ambalwa uDylan agunyazisa isampula kuxa wayevumela imvumi yaseBritane uGabrielle ukuba isebenzise le ngoma njengesiseko somkhondo wakhe ka-1999 othi 'Vuka,' eya kwi- # 1 e-UK. Ngokuka-Gabrielle, u-Dylan akavumanga nje kuphela, kodwa warhoxa kwezinye zeerhafu awayenelungelo lokuzifumana.
UWarren Zevon wabhala oku kwi-albhamu yakhe ka-2003 Umoya . UZevon wayesweleka ngumhlaza wemiphunga xa wabhala irekhodi, wasweleka kwakamsinya emva kokuba icwecwe likhutshiwe.
Le ngoma igutyungelwe kwisitayile se-reggae ngabaculi abaninzi kubandakanya uGT Moore kunye neReggae Guitars, uArthur Louis noEric Clapton.
Abanye amagcisa abazogquma le ngoma baquka uAvril Lavigne, uDolly Parton, uBruce Springsteen, uBon Jovi, uCold Chisel, uNeil Young kunye noAretha Franklin.
Isihloko sengoma sisetyenziswe njengesihloko sokuqala se- ICowboy Bebop imuvi. ICowboy Bebop yi-Anime yaseJapan eyaziwayo eyaduma kakhulu eMelika xa inguqulelo eyayibizwa ngokuba (yenziwa ekupheleni kweminyaka yama-90s) yasasazwa kwiCartoon Network ngo-2001. 'Imfesane kaMtyholi,' ngokucacileyo ikhupha iRolling Stones Song). Xa i-movie yeBebop epheleleyo yenziwa eJapan, yayibizwa ngokuba yi-title ICowboy Bebop: UKnockin 'kwiZango laseZulwini . Xa yabizwa yaziswa kwiithiyetha zaseMelika okwexeshana, bayitshintsha ICowboy Bebop: Umboniso bhanyabhanya ke uDylan akazukuthatha manyathelo asemthethweni ngokuchasene nabo.
Le ngoma ifana nomculo ngokufana no-Neil Young's 'Ungenakunceda,' eyabhalwa ngo-1969 kunye neempawu kwi-albhamu yeCrosby, Stills, Nash kunye ne-Young, Sele iboniwe .
Ngo-Okthobha u-2007, iigitare ezili-1,730 e-Shillong, e-India bayigqobhoza le ngoma kangangemizuzu emihlanu ukuseta irekhodi lehlabathi lelona likhulu lokudlala isiginci.
ndikwenze undive uthando lwam garth imilambo
amazwi kwezo yayiziintsuku
yintoni inyama yenyama oyenzayo yothando
amatye aqengqelekayo andinakufumana amazwi okwaneliseka
ndimbonile namhlanje ereception
usale kakuhle mhlobo wam kunzima ukufa